नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : बिबाद मिलाउने सजिलो उपाय !
बिबाद मिलाउने सजिलो उपाय !
यसरी नै एउटा फड्के पुल उद्घाटन गर्न र सेल्फी फोटो खिच्न लैजानुस, नेकपामा ओली, प्रचण्ड, माधव, झलनाथ, बामदेबजीहरुको बिबाद मिल्छ ! काँग्रेसमा देउबा र रामचन्द्र बिबाद पनि मिल्छ । उता तिनजना र ६ जना अध्यक्षको पनि बिबाद टुङ्गिन्छ । बिबाद मिलाउने सजिलो उपाय हेर्न यो भिडियो हेर्नुस । कती गम्भीर मात्र हुने आज धित मरुन्जेल हाँसौं । हुन्न र ??